Netizen Report: Hiverina Eny Amin’ny Fitsarana Ireo Bilaogera Zone9 Ao Ethiopia · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Netizen Report Team Nandika Liva Andriamanantena, Lila
Voadika ny 05 Avrily 2016 4:35 GMT
Niseho teo anatrehan'ny Fitsarana Tampony tao Ethiopia tamin'ny 29 Martsa 2016 ao amin'ny ambaratonga faharoa momba ny raharaha anenjehan'ny fanjakana mahakasika azy ireo Mpikambana efatra ao amin'ny bilaogy iraisana Zone9 – Abel Wabela, Atnaf Berahane, Natnael Feleke ary Befeqadu Hailu – . Ireo bilaogera, izay mpikambana Global Voices ihany koa, dia nosamborina tamin'ny Aprily 2014, voampanga noho ny Lalàna Enti-Miady amin'ny Fampihorohoroana eo amin'ny firenena , ary nampidirina am-ponja nandritra ny 18 volana, mandra-pahatonga ny fanafahana tamin'ny Oktobra 2015 . Nahomby ankehitriny ny fampakarana ny raharaha nataon'ireo manam-pahefana momba ny raharaha, ary ny bilaogera, na tsy ao an-tranomaizina intsony aza, dia mety hiatrika indray fanasaziana maharitra an-tranomaizina. Fohy ny fotoam-pitsarana tamin'ity herinandro ity ary nifarana tamin'ny fanemorana ho amin'ny 25 May 2016.
Tamin'ny resadresaka niarahana tamin'ny Voice of America , ny bilaogera Atnaf Berahane nanao hoe:
Nosamborina ny olona roapolo ary nakatona ny tranonkalam-baovaon'ny Antoko Komonista iray taorian’ny famoahana taratasy [mg] misokatra iray mitaky ny fialàn'ny Filoha Shinoa Xi Jinping. Nisioka tamin-tahotra ilay mpikatroka Wen Yunchao monina ao New York fa ny manam-pahefana no nihazona ny fianakaviany ho babo noho ny famoahana taratasy misokatra tao amin'ny tranonkalam-baovao Watching-Mijery. Nandà mafy ny fandraisany anjara tamin'ny famoahana ny taratasy i Wen, nanamarika izy fa noteren'ny manam-pahefana hanao fiaiken-keloka. Niteny ny mpanohitra Chang Ping fa nalain'ny manam-pahefana an-keriny ihany koa ny rahalahiny, ary efa nahazo tsindry mitovitovy amin'izany avy amin'ny governemanta ihany koa izy. Ny taratasy dia mitsikera ny politikan'i Xi, mandresy lahatra fa mitarika mankany amin'ny fanangonam-pahefana “tafahoatra” eo amin'ny tsenan'ny renivola sy ny fananana izany. Niseho teo amin'ny tranonkala ora vitsivitsy monja ny taratasy. Tsy namoaka vaovao intsony ny Watching-Mijery hatramin'ny 15 Martsa, ary ny mpiasa mpikambana ao amin'ilay vohikala dia nangatahana mba hametraka ny taratasy fialana.
Hisokatra any Rosia [mg] tsy ho ela ny foibe iray vaovao kasaina hanara-maso sy hisoroka “fanafiham-baovao”. Tamin'ny tafatafa niarahana tamin'ny seha-baovao Vedemosti i Igor Ashmanov mpiara-manorina sady ratremaben'ny fampitam-baovao namaritra ny fanafiham-baovao ho “hetsika propagandy, fandisoam-baovao, votoaty hosoka sy natao halaza haingana” . Natalia Kasperskaya, izay mpiara-manorina ny goavan'ny antiviriosy Kaspersky Labs no mpiara-manorina hafa amin'ity foibe ity. Ny tatitry ny fampitam-baovao ao an-toerana milaza ny planin-dry zareo no manoso-kevitra fa ny lasibatra voalohan'ny foibe dia tambajotra sosialy sy tontolon'ny bilaogy Rosiana , izay adihevitra ara-politika miainga amin'ny fanoharana “fotaka malama” no tena mavitrika ao. Tsy mbola mazava aloha ny fomba ifandraisan'ny foibe amin'ny lalàna misahana ny heloka bevava amin'ny aterineto sy ny ezaka fisorohana.
Nahemotry [mg] ny fitsarana ao Rabat indray ny fitsarana ireo Maraokana mpanao gazety sy mpiaro ny zon'olombelona fito. Ny dimy amin'ireo dia efa voampanga ho “mandrahona ny Filaminam-bahoaka”, raha ny roa hafa miatrika fiampangana ho “nahazo famatsiam-bola avy any ivelany nefa tsy mampahafantatra ny Sekretaria Jeneralin'ny governemanta”. Ireo rehetra ireo dia nanery ny governemanta Maraokana handray andraikitra amin'ny adidiny amin'ny zon'olombelona. Anisan'ireo voampanga i Hisham Almiraat, dokotera sy mpiitondratenin'ny tontolon'ny bilaogy ao Maraoka, izay mpikambana maharitra ato amin'ny fikambanana Global Voices. Nahemotra ho amin'ny 29 Jona ny fitsarana, izay tokony nanomboka amin'ity herinandro ity. Afaka manaraka ny diezy #Justice4Morocco ao amin'ny Twitter momba ny vaovao farany ireo mpanohana.
Nahomby tamin'ny fanokafana ny tenimiafina tamin'ny iPhone an'ilay voarohirohy voalohany tao amin'ny fitifirana faobe tao San Bernardino, California, miaraka amin'ny fanampian'ny Teknolojista iray tsy notononina anarana ny Birao Federalin'ny Famotopotorana (FBI) ao Etazonia. Nangataka tamin'ny Apple ny FBI hanaisotrany fiarovana sasany amin'ny finday, saingy tsy nety ny Apple, nilaza fa mety hanimba ny fiarovana ara-teknolojiany izany. Na dia nanome rariny ny Apple aza ny fitsarana, dia tsapa fa somary miovaova izany fanapahan-kevitra izany, satria ara-teorika izany ny FBI dia afaka mampiasa io fomba io hanesorana ny tenimiafina amin'ny telefaonina raitra amin'ny fanadihadiana manaraka, sady tsy mila ny fanampian'ny Apple.
Ao amin'ny matoandahatsoratry ny gazety The Washington Post, manazava ny Teknolojista sady manam-pahaizana manokana amin'ny fanafenam-botoaty Bruce Schneier fa hita miharihary ho misintaka tanteraka amin'ny fenitra ara-teknikan'ny fikambanana eo amin'ny fiarovana ny FBI, anatin'izany ny manam-pahaizana dia mizara fahalalana amin'ny tsy fahatomombanana amin'ny fiarovana ara-teknika mba ho voavaha haingana sy tsara araka izay azo atao ny faharefoana ara-piarovana. Manao ny mifanohitra amin'izany tanteraka ny FBI, hoy izy :
Nomena [Ny FBI] izay mety ho faharefoana rehetra ahafahany miditra mangingina amin'ny findain'i San Bernardino, ary mitazona izany ho tsiambaratelo. Mitoetra ho marefo ny iPhone antsika rehetra manoloana izany fahombiazana izany. Anisan'izany ny telefaonina raitra ampiasain'ny manam-pahefana voafidy sy ny mpiasa federaly ary ny finday ampiasain'ny olona izay miaro ny foto-drafitrasa ara-piarovan'ny firenentsika izay tena saropady, olona hitondra adidy ho fampiharana ny lalàna , anisan'izany ny maro amin'ny mpiasan'ny FBI.
Ny Arisivan'ny aterineto dia manome soso-kevitra ny hanovana ny lalàna Amerikana momba ny zon'ny mpamorona hahatonga ny votoaty ho azo idirana mandra-pahita porofo fa voaaron'ny zon'ny mpamorona tokoa izy io, ary nampilahatra ny fotokevitry ny lalàna ao Etazonia fa ny voampanga iray dia tsy manan-tsiny mandra-paha voaporofo azy ho meloka. Ny fiovana dia mamela ny votoaty hitoetra an-tserasera mandra-pahatapakevitra amin'izay tompon'ny votoaty raha misy ny fifandirana amin'izay tompon-jò. Nandefa fitsapan-kevitra tamin'ny vahoaka tamin'ny faramparan'ny taona lasa teo ny Biraon'ny fandraketana zon'ny Mpamorona ao Etazonia mba hijery izay manavesatra amin'ny fombafomba famantarana ny tompon'ny zon'ny mpamorona amin'izao fotoana izao, manavesatra ny mpanome tolotra aterineto, ary ny rehetra amin'ny ankapobeny. Ny Arisiva koa dia naneho ny ahiahiny momba ny rafitra “Mariho ary Akatony” izay rafitra hisorohana votoaty tsy hisy haka indray ary tsy hiverina hiseho intsony .
Ny mpanao lalànan'ny Vondrona Eoropeana dia mety hitory indray ireo milina mpanangom-baovao tahaka ny Google News amin'ny zon'ny mpamorona sy ny mifanakaiky aminy, izay fantatra ihany koa amin'ny hoe “hetra Google”. Nahavita namoaka lalàna mitovy amin'izany koa ny trano famoahana tany Alemaina sy Espaina, ary eo am-pieritreretana ny hampiditra ny politika ao amin'ny ambaratongan'ny Vondrona Eoropeana i Gunther Oettinger, alemà lehiben'ny politika toe-karena nomerika tao amin'ny Vaomiera Eoropeana. Nanomboka nanao fakan-kevitra izay tontosaina hatramin'ny 15 Jona hoavy izao ny sampan-draharahany raha “nisy fiantraikany” amin'ny mpanjifa, mpanoratra, mpamoaka sy ny orinasan'ny tranonkala ny raharaha zon'ny mpamorona sy ny mifanakaiky aminy natao teo aloha, araka ny Fortune.
Nandray anjara tamin'ity tatitra ity i Ellery Roberts Biddle, Weiping Li, Hae-in Lim, Tetyana Lockot ary i Sarah Myers West .